अमृत शर्मा ढकालको गीतकृति 'लजालु पहाडहरू'’ विमोचन
हुलाकबाट गरिएको मतदान नमान्ने भन्दै ट्रम्पले दिएको निवेदन पेन्सिल्भेनिया अदालतद्वारा खारेज
काठमाडौं ओर्लंदा यसरी स्वागत गरियो चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई (तस्वीरहरू)
सुर्खेतका चार स्थानीय तहमा १५ शय्याका अस्पताल शिलान्यास
अन्याय थियो, असाध्यै अन्याय ! मेरी बूढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ वर्ष टेकिसकेको छ। यसपालि आफ्नो बुवाले धेरै भित्रिनी राखेर गरेको अन्यायबारे हामीलाई सुनाउनुभएको छ, उहाँकै 'खराे' शब्दमा:
खल्लो भयो तीज भोलि (७ भदाै) पञ्चमी। तीजभन्दा पनि पञ्चमीमा हाम्रो घरमा विशेष तयारी हुन्थ्यो। पूजा त हुँदैनथ्यो, तर ‘कर्कलो भात खाने’ उत्सवका लागि हामी तम्सिन्थ्यौँ! यो चाहिं मेरो बूढीसासू (चन्द्रकुमारी जाेशी, अहिले १०५ वर्ष) को रहर।
श्री ५ ले अन्माए, श्री ३ ले भित्र्याए मेरी बूढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्की–अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। यसपालि वहाँले ऊ वेला बच्चा जन्मने र सुत्केरी स्याहार्ने बारेका सम्झना सुनाउनुभएको छ। खासगरी वहाँको माहिला बुवालाई पुत्रलाभ हुनुअघि र पछिको भव्य माहोलको वर्णन वहाँकै शब्दमाः
धुमधाम नाम कमाएर गइन् सानीमैया मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ । विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्की–अड्की, दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई पुराना कुरा गर्नुहुन्छ । मुवाको सम्झना उहाँकै शब्दमाः
बुहारीको सम्झनामा अंगुरबाबा जोशीः सासू हैन गुरु 'मैले मामी (मेरी सासू अंगुरबाबा जोशी) लाई देख्नुभन्दा धेरै अघि उहाँले मलाई देखिसिएको रहेछ । म स्कूलबाट फर्कंदा मदन पुरस्कार पुस्तकालय अगाडि दादा (बुवा, कमलमणि दीक्षित) सँग कुरा गर्दैगर्दा मामीले मलाई देखेदेखी नै बुहारी बनाउने नजरले हेरेको पछि भनिसिन्थ्यो ।'
ज्वाईं सहितै माइत बसें मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ । विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा अड्की–अड्की, दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई पुराना कुरा गर्नुहुन्छ । मुवा ९ वर्षको हुँदा आफूभन्दा १३ वर्ष जेठा हिमालयराज जोशीसँग बिहे भएको थियो । १५ वर्षको उमेरमा ८ महीनाको छोरो काखमा हुँदा विधवा हुनुभयो । मुवा माइत (ढोकाटोल) मा नै धेरै बस्नुभयो । घर खलकसित खासै हिमचिम भएन । यसपालिको अंशमा बिहे, पति, ससुरा र सौतेनी सासूका बारेमा उहाँकै शब्दमाः
“बुनेरै लखपति भएँ” बुनेर मलाई पनि सुख भयो, उनीहरूलाई पनि सुख भयो, बा । आफैं कमाएपछि, कसैसित हात थाप्न परेन । काम गर्नेहरू खुशी हुन्थे । मैले काम दिएको कारण उनीहरूको हातमा पैसा भएकोले, मलाई त महारानी जस्तै आदर गर्थे । अनि घरबाट बाउआमा भेट्न आएका छन् भने कोसेली दिन दौडेर आउँथे । कैले भोटे आलु, कैले के।
सबैकी गुरुमाः बडमुवा मेरी बूढीसासू (सासूकी सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ । विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्कीअड्की, दोहोर्‍याई, तेहेर्‍याई पुराना कुरा गर्नुहुन्छ । यसपालिको अंश उहाँकी एकदमै प्रिय हजुरआमा बडमुवा बारे हामीसितको कुराकानीमा आधारित छ ।
बन्दाबन्दी बन्याे, बुझ्ने र सिक्ने अवसर झण्डै दुई महीनाको बन्दाबन्दीमा मेरो फोक्सोले राहत पाएको छ । घाँटीको खसखस कम भएको छ । सिँगान कालोको सट्टा सेतो भएको छ ।
बाहुनले भविष्यवाणी गरेका थिएः साँच्चिकै गयो ९० सालको भुइँचालो ! ९० सालमा एउटा असाध्यै जान्ने बाहुनले “यसपालि भयङ्कर हुनेवाला छ, ग्रहहरूका कारण प्रलय हुन्छ”, भनेका थिए। त्यसको हल्ला निकै भएको थियो । कागजमा छापेर भित्ताहरूमा पनि टाँसेको थियो । त्यसमा “खराब हुनेवाला छ, बचेर बस” भनेर लेखिएको थियो । त्यति बेला मुवाको उमेर १८ वर्ष थियो ।
उलिनकाठ चढेर बद्री–केदार
मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेर १०६ वर्ष भइसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्की अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। यसपालि उहाँले बद्री–केदार तीर्थयात्राका सम्झना सुनाउनुभएको छ । तीर्थयात्राका ती घटना उहाँकै शब्दमाः
मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्की अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। यसपालिको अंश मुवाले सानो बेलाको रमाइलो- खेलौना, कुकुर र चाडबारे गरेका कुरा उहाँकै शब्दमा:
सन्तान राणाका, दूध खुवाउने बाहिरका सुत्केरी
मेरी बूढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ वर्ष टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा अड्की–अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। यसपालि खानपिन, स्याहारसुसार बारेका सम्झना उहाँकै शब्दमा–
बुहारी पढाउँदाका दुःख (उवेलाका कुरा) बूढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ वर्ष टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै लगे पनि, आफूले देखेका र भोगेका पुराना घटना अड्की अड्की सुनाउनुहुन्छ। यसपालि आफ्नो र बुहारी अंगूरबाबा जोशीको पढाइबारेको सम्झना उहाँकै शब्दमा–
जुद्धशमशेर ज्यादतीका ती दिन बूढीसासू (सासूकी सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ वर्ष टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै लगे पनि आफूले देखेका र भोगेका पुराना घटना सम्झिएर अड्की–अड्की सुनाउँदा हामीले त्यसवेलाको समाज जान्ने मौका पाएका छौं। यसपटक राणाकालबारेको सम्झना उहाँकै शब्दमा–
आउला त्यो दिन
समाज परिवर्तनको क्रम हेर्दा लाग्छ, मेरा नातिनीहरूले आफ्ना आमाभन्दा सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्नेछन् तर, समतामूलक समाज निर्माणका लागि एउटा महत्वपूर्ण तगारो अझै बाँकी छ।
दशैंको फ्रक सकेसम्म वर्षौं लगाउन मिल्ने गरी सिलाइएको हुन्थ्यो । त्यसैले कपडाले भ्याएसम्म पछि खोल्न मिल्ने गरी फेरा दोबारेर सिलाइन्थ्यो ।
यस्तो विपत्ति त अर्को साल पनि आउने नै छ । त्यसबेलाको सुरक्षाको लागि क–कसले के–के गर्ने हो, जिम्मेवारी र दायित्व के–के हुन्, अहिल्यैबाट दिमागमा खेलाउन थाल्नुपर्छ, ताकि अहिलेका पीडितको व्यवस्थापन सकिनासाथ त्यसमा काम गर्न सकियोस् ।
दाइहरूसँगै बुवालाई दागबत्ती दिई अस्तु हातमा लिएर वागमतीमा सेलाउँदा शोकविह्वल मेरो मनमा एक किसिमको तरंग (शायद सन्तुष्टिको !) संचार भइरहेको थियो ।